Izitebhisi ze-Elegant Room eziya e-UNC, edolobheni - I-Airbnb
Izitebhisi ze-Elegant Room eziya e-UNC, edolobheni
Leli gumbi elibukekayo elineziko elineziko linendlu yokugezela yangasese futhi kungeneka isihlalo sabakhubazekile. Le ndlu eneminyaka engu-100 yakhiwe eduze kwe-UNC namabhulokhi amabili ukusuka edolobheni. Izivakashi zamukelekile ukwabelana ngemicimbi nezinsiza esikhungweni seSayensi Yabantu.
... Izihlalo ezinamaphiko ezimbili ziseduze nendawo yezitini. Ideski lisegumbini elikhanyayo elinamafasitela angama-75. Umbhede wamaphosta osayizi wendlovukazi upholiswa ngesineke yifeni yosilingi. Igumbi linophahla oluphezulu lwe-10', amashalofu ezincwadi akhelwe ngaphakathi namakhabethe, kanye ne-wainscotting yasekuqaleni.
...Igumbi Elihle linendlu yokugezela encane ye-en-suite, elungele ukuhlala isikhashana.
... Igumbi liyingxenye Yesikhungo Sesayensi Yesintu, esinezindlu eziyisikhombisa ezineziphephetha-moya ekhempasini yayo engamahektha amabili enkabeni ye-Chapel Hill. Iphethwe yinhlangano engenzi nzuzo eyaqashwa ngo-1981 ukukhuthaza ukuxhumana kwezinhlaka ezihlukene kusayensi yokuziphatha nezenhlalo (yaqhuba izingqungquthela ezidumile ze-Nags Head oceanfront iminyaka engu-25), iSikhungo sihlinzeka ngendawo yokuhlala yesikhashana neyesikhathi eside kubafundi abaneziqu, ubuhlakani, kanye namalungu omphakathi jikelele anentshisekelo yokuqonda umhlaba esiphila kuwo. Iphinde ixhase izinkulumo namasemina.
... Indlu, eyakhiwa ngo-1907 futhi yahlala iminyaka engaphezu kwengu-50 umndeni wakwaCallahan, inezindawo zokucima umlilo ezintathu kanye nompheme omboziwe ongaphambili.
4.74 · 356 okushiwo abanye
... Eduze ne-UNC, inyuvesi yomphakathi endala kunazo zonke esizweni, uhambo olufushane oluya esibhedlela, izikole zezokwelapha, nekhampasi enkulu, okuhlanganisa i-Memorial Hall, i-Playmakers Theatre, i-Ackland Art Museum, i-Kenan Stadium, ne-Dean Dome.
.... Lesi sikhungo sisenkabeni yesinye sezifunda ezimbili ezingokomlando e-Chapel Hill, lesi Sikhungo siphinde sinikeze amathuba amahle okuhamba ngekhampasi nasezindaweni ezizungezile ezinhle zokuhlala enyakatho nasentshonalanga.
... Umgwaqo uMcCauley ikakhulukazi unezindlu zozimele ezinezitezi ezimbili ezinamavulandi amboziwe. Njengoba kungekho emigwaqweni, ithrafikhi ngokuyinhloko ngabagibeli bamabhayisikili nabahamba ngezinyawo, abanengxube ehlukahlukene yabafundi abathole iziqu, abafundi abaneziqu, ubuhlakani kanye nabathathe umhlalaphansi abahlala endaweni.
... Umninikhaya wakho, ohlala esakhiweni esiseduze, uzokuhlola, aphakamise izinto ongazenza nezindawo ongaya kuzo, futhi aphendule yonke imibuzo ongase ube nayo.
... Ungase uhambele imicimbi eSikhungweni Sesayensi Yesintu.
... Uzoba negumbi elikhiyiwe ikhiphedi ngayinye.
... Ungase uh…